‘दुर्लभ’ आँपका बोटलाई सुरक्षा दिन ६ कुकुर र चार गार्ड – Sapana Sanjal
June 18, 2021 217
Sapana Sanjal : अहिले आँपको मौसम छ । बजारमा किसिम किसिमका जताततै आँपै आँप छन् । तर के तपाईलाई बिश्वास लाग्छ? कुनै परिवारले आँपको बगैँचाको सुरक्षाका लागि ६ कुकुर र ४ जना गार्ड सहितको पहरा दिन्छ भनेर? भारतमा यस्तै भएको छ ।